Home MAAMULKA FOOTBALL Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Manager ah ee ugu fiican ee loo yaqaan Nickname; 'Fergie'. Sheekada Alex Ferguson iyo akhbaar aan la shaacin oo xaqiiqda ah waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, Lets Begin.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Nolosha Hore
Sir Alexander Chapman Ferguson wuxuu ahaa oo ku dhashay Glasgow Scotland, on 31st ee December 1941 by Alexander Beaton Ferguson (aabaha) iyo Elizabeth Hardie Ferguson (hooyadii).
Waxa uu ku dhashay guriga uu ku dhashay ee Shieldhall Road ee Govan laakiin wuxuu ku koray kiraysiga 667 Govan Road (taas oo tan iyo markii la burburay). Ilmo ahaan, wuxuu la noolaa waalidkiis iyo sidoo kale walaalkiis ka yaraa Martin. Magaalada, Govan waa xaafad shaqo oo ku taal Glasgow, Scotland. Qof kasta oo ku nool magaalada oo ay ku jiraan aabihii Ferguson ayaa lahaa fursad weyn oo uu ku noqon lahaa ganacsiga dhismaha. Nuxur ahaan, wuxuu ku noolaa beelaha dhismaha sida ilmo yar.
Koritaanka, Alex wuxuu dhiganayey Dugsiga Hoose ee Broomloan Road iyo Dugsiga Sare ee Govan, iyo taageeray naadiyada kubada cagta ee Rangers. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray wax ka duwan isaga oo ka duwan carruurta kale ee da'diisa. Wuxuu ahaa wiil caqli leh, laakiin xiiso yar ayuu u ahaa daraasaddaha, waxaana uu ahaa mid xiiso badan oo kubada cagta ciyaaraya.
Wuxuu jecel yahay inuu kubad kubadeed kubbadda kula ciyaaro walaalkiis ka yar, Martin, iyo asxaabtiisa oo dhex maraya guryaha kireysiga, iyo caawimaad ka timid aabihiis, wuxuu ku soo bartay tayo dhalinyaro ah.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Nolosha Qoyska
Fergie wuxuu ka yimid qoys sabool ah. Waxa uu lahaa qoys sabool ah laakiin farxad leh ayaa bilaabay nolosha nolosha gawaarida Govan ee Glasgow. Aabihiisna marnaba ma dhicin heer sare oo culus horey uga jiray dhismaha markabka. Waxa uu degay kubada kubadda cagta si ay u noolaato taasoo keentay mushahar yar.
Si kastaba ha ahaatee lix sano ayaa dhalashadii Alex Ferguson ee Alexander Beaton Ferguson uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta isagoo ka mahadceliyey fursadda ka timid ganacsiga gawaarida ee Glasgow. Wuxuu u jeestay a caawiye qaboojiye . Waqtigaan wuxuu ku kalsoonaa waxaana uu hadda ku quudin karaa da 'yarta Alex (hoose), walaalkiis iyo hooyadiis.
Nasiib daro Alex Ferguson, labada waalidba wuxuu u dhintay cudurkaas (kansarka sanbabada) ka hor da'da 67 kaas oo ka hooseeya da'da Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahaayeen labada sigaar cabbin. Alex Ferguson aabbihiis wuxuu u dhintay kansarka sanbabada da'da 66 sanadka 1979. Hooyadii Ferguson ee Elizabeth ayaa sidoo kale ku dhintay kansarka sanbabada da'da 64 sanadka 1986. Dhimashadeeda waxay dhacday markii uu ahaa seddex isbuuc ka dib markii uu magacaabay macalinka Manchester United. Dhimashadeeda dhimasho la'aanta ah ayaa ka tagay maamulaha cusub iyo mid murugo leh muddo bilo ah. Waxa uu ahaa sababta uu ku bilaabanayo bilowgii xirfadiisa tababarenimo ee Manchester United. Sababta uu ugu dhawaaday inuu shaqada ka eryo. Waxay ahayd waqti dheer oo murugo iyo a "Saameyn xun" si labada waalidba ay u noqdaan cudur isku mid ah (kansarka sanbabada).
Fergie waxay la dagaalantay oo ay gacan ka gashay dawladda Scottish-ka ah 'Early Detect Cancer' ololihii lagu helay lacag dhan £ 30million. Alex Ferguson wuxuu ogolaaday inuu horey u sii wado ololaha sababtoo ah qalbigiisu waa uu dareemay, isla markaana uu farriin u diro in ogaanshaha hore loo ogaado dadka "Waqti dheeraad ah" inay la qaataan qoyskooda.
Wuxuu yiri: "Waxaan xusuustaa in loo sheegay in waalidkaygu qabo kansarka sanbabada. Waxaan sidoo kale xusuusinayaa maalinta la ii sheegay in hooyey ay haysato dhawr maalmood oo keliya si ay u noolaato. Waxaan isbitaalka u tagay, dhakhtarkuna way i fadhiisteen, wuxuu ii sheegay in uu qabay kansarka sanbabada, ka dibna wuxuu yiri: "Waxay haysataa ku dhawaad ​​afar maalmood oo ay ku noolaato". Wuxuu ahaa sax. Waxay u dhimatay dhab ahaan afar maalmood ka dib. Dhimashadeeda iyo waqtiga waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii ugu xumaa ee aan aragnay oo dhacay. Laakiin hadda way ka duwan yihiin. Maalmahan, kansarka sanbabadu maaha in uu noqdo xukun dil ah. Soo helitaanka hore waxay badbaadin kartaa noloshaada waxayna ku siineysaa waqti dheeri ah oo aad ku qaadato qoyskaaga. Waxaan rabay in aan ka qaybqaato ololahan iyada oo labada waalidba lumiyay labadaba kansarka sanbabada. Waan ogahay dhibaatada ba'an ee kansarka ku yeelan karta qoysaska. Marka halkii aan waxba ka qabanayn, waxan ku boorinayaa cid kasta oo walwalsan in la hubiyo in la baaro sida ugu dhakhsaha badan. "
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Nolosha iyo Xiriirka Qoyska
Alex Ferguson wuxuu ku noolaa koonfurta magaalada Manchester intii uu da 'yaraa. Waxay ahayd magaaladan uu la kulmay xaaskiisa si ay u noqoto, Cathy. Labadooduba waxay guursadeen 1966.
Guurka waxay isla markiiba u barakeeyeen miro. Wiilkii ugu horeeyay ee Mark wuxuu ku dhashay 1968. Taasi waa laba sano ka dib guurkooda.
Waxay sugayeen afar sano ka hor intaanay laheyn mid kale. 9th Febraayo, 1972, Alex Ferguson iyo xaaskiisa ayaa labba kale oo mataano ah loo yaqaan 'Jason iyo Darren'.
Alex Ferguson ayaa waxaa lagu sharaxay xaaskiisa xaaskiisa Cathy. Waxa uu jeclaaday iyada oo maalin ka mid ah. Waa qof aan u eegi doonin doorka haweenka ee guriga. Waxa uu mararka qaar ka caawin lahaa kiro kasta oo ka mid ah jikada.
Labada jecel waxay arkeen caruurtooda inay ku koraan farxad. Alex Ferguson, "Qoysku maaha wax muhiim ah. Waa wax walba. "
Xaaskooda waxaa lagu sharaxay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan UK. Mid ka mid ah dad badan ayaa u arkaan in ay u qalantaa raali-gelin. Noloshooda guurka loo dabaaldegay waxay sii wadeen in ka badan sanado 51.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Koraaya Carruurta
Wiilka weyn ee Alex Ferguson ayaa ahaa tababarihii hore ee Peterborough United iyo ciyaaryahankii hore ee xirfadlayaasha ahaa.
Mid ka mid ah labada mataan ee loo yaqaan 'Daren' oo lagu magacaabo Daren ayaa hoosta ka xariiqay markii uu ka soo hoos ciyaaray Manchester United oo ka timid sanadka 1990 ilaa 1994. Hadda wuxuu maamulaa Doncaster Rovers sida waqtiga qorista.
Labo kale oo mataano ah, Jason Ferguson ayaa maamusha hay'ad kubadda cagta ah oo la yiraahdo 'Elite Sport"taas oo mar la wadaagtay Manchester United mudadii sano ee uu aabihiis maamulayay kooxda. Waxa kale oo uu maamula shirkad maareyn dhacdooyin.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: La xaajoodaan David Beckham
Waa iska cadahay in Ferguson uu David Beckham u tixgelinayo inuu yahay mid ka mid ah asxaabtiisa. Wuxuu jecel yahay Beckham; wuxuu u maleynayay inuu yahay wiil, wax walbana ma laheyn sida jidka uu uga careysiiyay riyadiisii ​​kubada cagta; waayo mawqifkiisa, dulqaadkiisa iyo rabitaankiisa inuu caddeeyo dadka khaldan. Laakiin Ferguson waxa uu aaminsan yahay in Beckham uu ilaaway waxa uu sameeyay xiddig, islamarkaana uu sii xumaanayo inuu shaqo adag ku shaqeeyo garoonka.
In 2003, Ferguson wuxuu ku lug lahaa dood muran dhalin ah oo uu la leeyahay David Beckham. Waxa uu ku eedeeyay Beckham inuu ku guul darreystay inuu ku soo laabto goolkii Arsenal ee Old Trafford. Ferguson ayaa la sheegay in uu dhagax ku dhuftay kubada cagta, taasoo keentay in ciyaaryahanka uu wajaho wajiga islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray Beckham.
Si kastaba ha ahaatee, David Beckham waxbaa sameeyay. Waxa uu oggolaaday boogta in la sawiro oo la wareysto maalinta xigta. Kadib markii uu arkay shaqadiisa, Ferguson wuxuu go'aansaday inuu iibiyo. Wuxuu aaminsan yahay in Beckham uu dareemay inuu ka weynaaday isaga iyo kooxda.
Ferguson mar uun wuxuu qoray in Beckham uu dhaawaciisa wajiga u soo jiiday xiddig. Sida laga soo xigtay isaga 'Waxa uu lahaa go'aankii miyiriga ahaa ee lagu cambaareeyay caan ka baxsan garoonka ka dib dhaawaca'.
Waxa kale oo uu qoray in uu jiro maya "Sababta Kubadda Cagta" Beckham wuxuu aaday Los Angeles. "Waxa uu dhumiyay fursada uu u noqon lahaa halyeeyadii ugu fiicnaa ee United." Ferguson ayaa yiri.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: La xaajoodaan Roy Keane
Sir Alex Ferguson wuxuu sawiraa sawirka Roy Keane, oo ahaa kabtiisii ​​hore iyo taliyihii, sida muuqaal qalafsan oo cabsi leh, awood u leh inuu cabsi geliyo xitaa iyo, hubaal, ciyaartoy badan oo gudaha qolka labiska. Keane waxa uu xukumay feero bir ah iyo caro fara badan, taasoo uu Ferguson sheegay inuu ahaa qeybta ugu adag ee jirkiisa.
Dhalinyaradu waxay ka mid yihiin Old Trafford folklore, Ferguson wuxuu hoosta ka xarriiqay hoos u dhaca ku yimid awoodda Keane iyo jaahwareerka uu dareemay.
Keane wuxuu aad uga xanaaqay waxa uu dareemay in uu ahaa dhismayaal xilli ciyaareedkii hore oo aan badnayn oo ka jiray garoonka tababarka Manchester United. Wuxuu sii waday inuu bixiyo wixii loogu magac daray 'wareysi aan caadi aheyn oo uu siiyay MUTV kaasoo uu ku dhaleeceynayey Ferguson iyo sidoo kale asxaabtiisa kooxda oo ay ku jiraan Kieran Richardson, Darren Fletcher, Alan Smith, Edwin van der Sar iyo Rio Ferdinand.
Keane ayaa soo jeediyay in kooxdu ay daawato wareysiga si ay u sameyso maskaxdooda iyo waxa soo raaca uu ahaa iska horimaad aan fiicneyn oo u dhaxeeya isaga iyo ciyaartoy badan oo ka mid ah Ferguson. Waa inuu dhaqangaliyaa, islamarkaana wuxuu si dhaqso ah u saameeyay bixinta qandaraaska Keane iyo inuu u dhaqaaqay Celtic.
Ferguson ayaa qoray in Keane uu ku fariistay si uu u arko inuu raali gelin ka bixiyo, laakiin xiriirka ayaa tan iyo markii uu noqday mid aad u xun, ka dib markii uu faallo ka bixiyay labada ciyaaryahan.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Waana Ruud
Alex Ferguson ayaa hal mar la lahaa Ruud oo uu sheeganayay sababtoo ah caqligiisa. Kulankooda ayaa noqday sababtii Ruud van Nistelrooy uu uga tagay Manchester United isagoo hoosta ka xariiqay duruufaha 2006. Arrintoodii ayaa bilaabantay markii Ruud si cad u dhaariyay oo loola cararay markii uu kursiga keydka ku jiray intii lagu gudajiray Carling Cup final-kii kulankii ay wajaheen Wigan.
Ferguson ayaa sheegtay inuusan fileynin inuu iibiyo weeraryahanka Real Madrid, laakiin dhaqankiisa inta uu ku jiro gacanta ayuu ku qasbay. Si kastaba ha ahaatee, Van Nistelrooy ayaa wicitaan teleefoon ah u diray Ferguson isagoo ka soo baxay Janaayo January 2010 si uu uga xumaado dhaqankiisa.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Soo celinta Ciyaarta Amaahda
Ka dib markii la ceyriyay wiilkiisa twin Darren Ferguson Preston North End, Ferguson ayaa si dhaqso ah u soo celiyay ciyaartoydii amaahda ahaa Ritchie De Laet, Joshua King iyo Matty James oo ka soo jeeda Preston sida uu dhigayo nidaamka cusub ee maamulka. Ka dib wuxuu sharaxay inuu ahaa codsigii ciyaartoyda ee ahaa inaanan ku laabanin Preston ka dib markii uu bedelay tababare. Tababaraha Stoke City Tony Pulis ka dib markii uu soo laabtay labo ciyaaryahan oo Manchester United ah oo ka yimid Preston sidoo kale, isagoo sheegay in baahida loo qabo ciyaartoyda inay buuxiyaan jadwalka kooxdiisa.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Markii la ogolaaday Gareth Bale inuu ka tago
Sir Alex Ferguson marnaba waligiis kama walwalin ciyaartoyda soo baxa laakiin macalinkii hore ee Manchester United ayaa ka reebay Gareth Bale, isagoo qirtay inuu seegay ciyaaryahanka.
Warar ka soo baxaya Manchester United ayaa lagu soo daabacay in Bale uu la kulmay dalabkii Ferguson ee xiddiga bidix ee Ryan Giggs. Ferguson ayaa sidoo kale dalbaday inuu dalab u diro Bale si uu u keeno weeraryahanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray wax sababay bedelkii burburay. Alex Ferguson ka dib markii uu arkay isagoo ka cabanaya inuu ahaa mid gaaban.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Mihnadda Maamulka ee Soo-koobidda
Ferguson waxa uu bilaabay mustaqbalkiisa munaasabadda East Stirlingshire ee 32, isagoo saameyn degdeg ah ku yeeshay dabeecadda dabiiciga ah. Waxa uu u dhaqaaqay St. Mirren ka dib dhowr bilood, islamarkaana inkastoo uu hogaanka u dhiibay Saints horyaalka horyaalka heerka 1aad ee Scotland, 1974, ayaa laga saaray sannad ka dib markii uu jabiyay heshiiska.
Waxa ay la jirtay Aberdeen, Ferguson ayaana caan ku noqday sumcadiisa isagoo ah tababare sare. Alex Ferguson ayaa hogaanka u dhiibay Aberdeen saddex horyaal oo Isbaanish ah, afar Scottish Cups, League Cup, Super Cup iyo Champions League Winners Cup sideed xilli ciyaareedkii.
Alex Ferguson ayaa loo caleemo saaray tababaraha kooxda Manchester United ee bishii November ee 1986. Shaqadiisii ​​waxaa la soo sheegay in uu ku jiro line ka dib markii si xawli ah oo hore u kordhay xilligii 1989-90. Dadka saboolka ahi waxay bilaabaan inay ka soo horjeedaan dhimashada hooyadiis. Waxa uu wakhti dheer ku dhuftay hooyadiis oo u dhimatay kansarka sanbabada taas oo ku dhowaad isaga u shaqeeystay. Nasiib wanaag isaga, Red Devils waxay arkeen kabriidii ay ku guuleysteen FA Cup xilli ciyaareedkii hore. Taasi waxay ku haysatay shaqadiisa. Tartanka guusha ayaa la raacay IYO inta kale ee ay yiraahdaan waa taariikh.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Hantiisa
Muuqaal naxaas ah oo ah Ferguson, oo uu u qaabeeyo sawirqaade Scottish ah Philip Jackson, ayaa lagu soo bandhigay meel ka baxsan Old Trafford on 23 November 2012.
On 14 Oktoobar 2013, Ferguson wuxuu ka soo qayb galay xaflad ka dhacday waddada u dhow garoonka Old Trafford Diyaarinta Biyaha ilaa Sir Alex Ferguson Way
Moreso, weedha "Waqtiga adag" Ferguson ayaa ku adkeysanaya in marxaladihii ugu dambeeyay ee tartanka horyaalka uu ku jiro Ferguson Collins English Dictionary iyo Oxford English Dictionary.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Maareeyayaasha Horumarinta
In badan oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee Ferguson waxa ay isku dayeen inay noqdaan macalimiin caan ah oo ay ka mid yihiin Tony Fitzpatrick, Alex McLeish, Gordon Strachan, Mark McGhee, Willie Miller, Neale Cooper, Bryan Gunn, Eric Black, Bryan Robson, Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane , Paul Ince, Chris Casper, Darren Ferguson, Ole Gunna Solskjær, Henning Berg iyo Gary Neville.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Politics
Waxaa la siiyey abaalmarinta Britishka ee 1999 sababtoo ah kaalintiisa kubada cagta. 1998, Ferguson ayaa lagu magacaabay liiska deeq bixiyeyaasha ugu weyn ee gaarka loo leeyahay Xisbiga Shaqaalaha. Waxa uu yahay siyaasi awood leh iyo taageere joogta ah. Bishii Janaayo 2011 Graham Stringer, Xildhibaan Shaqaale ah Manchester iyo taageeraha Manchester United, ayaa ugu yeeray Sir Alex inuu sameeyo noloshiisa nolosha. Hadii ay taasi dhacdo, Ferguson ayaa noqon lahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee hore ama tababarihii hore ee kubada cagta ama maareeyaha kubada cagta Guriga Eebaha. Stringer iyo xildhibaan Manchester Labor Paul Goggins ayaa ku celiyay wicitaankan ka dib markii Ferguson uu ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha May 2013. Si kastaba ha ahaatee, ilaha aan la magacaabin ee Daily Mirror wargeyska ayaa sheeganaya in 1 August August 2013 uu aqbalay Ferguson.
Inta lagu jiro 2014 Aftida xornimadeed ee Scottish-ka, Ferguson wuxuu ahaa taageeraha codka iyo jamaahiirta Wanaagsan Wadajir ololeyaal taageera Scotland oo ku hadhay qeyb ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska. Waxa uu dhaleeceeyay Xisbiga Qaranka Scottish-ka, iyo hogaamiyahooda Alex Salmond, go'aankooda ku saabsan in laga saaro Xerooyinka ku nool dibadda Scotland, laakiin inta kale ee Boqortooyada Ingiriiska, ka codeynta aftida.
Sir Alex Ferguson Sheeko Xeeldheer: Education
2009, Ferguson waxa uu ka soo qaatay Agaasimaha Sharciga ee Maamulka Ganacsiga Jaamacadda Manchester Metropolitan.
Waxay ahayd jaamacadda labaad ee uu ka soo qaatay jaamacadda, ka dib markii la siiyay xirfadlayaal sharaf leh oo ku jira 1998.
Taariikhda Kubadda Cagta Scottish
Sheekooyinka Carruurnimada Julian Nagelsmann Plus Xaqiiqda Untold Biography
Nuno Espirito Santo Storyhood Plus Sheekooyinka Xogta Loo Yaqaano
Jurgen Klopp Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
Unai Emery Sheeko Xeeldheer Xogta Wanaagsan
Joachim Low Ilmihii Sheeko Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka Lahaanshaha
Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 26, 2020